ActiveConversion: Fantaro ary araho ny mpitsidika tranonkala | Martech Zone
ActiveConversion dia lozisialy fanarahan-dia mitarika ho an'ny orinasa kely na salantsalany. Ny vahaolana varotra sy varotra ataon'izy ireo dia ahafahan'ny orinasa mamantatra ireo mpitsidika liana, orinasa ary mpitarika mahay mitsidika ny tranokalanao. Ny tatitra voalahatra momba ny fitarihana mahay dia azo alefa any amin'ny ekipan'ny varotrao hampahafantatra azy ireo ny vina amin'ny Internet mavitrika indrindra.
ActiveConversionNy teknolojia fanarahan-dia dia afaka mamaritra ny hetsika ataon'ny mpandray ny mailaka sy ny valiny amin'ny tolotra mailaka. Ny vahaolana aza dia mety hanome fahitana manerana ireo fantson'ny fampielezankevitrao toy ny marketing an-tserasera, dokam-barotra pirinty, haino aman-jery fampielezana, ary ireo mpitsidika mivantana ny tranokala na pejy fitodiana.
Ny mailaka alain'izy ireo, ProspectAlert, dia manome fomba fijery afovoany amin'ny fampahalalana momba ny firaka ao amin'ny ActiveConversion. Ny fampahalalana lehibe dia omena an'ireo solo-varotrao amin'ny vinavinany voatendry. Ny rafitra dia mifamatotra amin'ny Salesforce.com na Microsoft Dynamics fa tsy ilaina ny CRM - afaka miditra mivantana ny ekipan'ny varotrao hahita ny fampahalalana rehetra nangonina.
Tags: fiverimberenanamamantatra firakafantaro ireo mpitsidikaMicrosoft Dynamicssalesforcefamantarana ny mpitsidika
Manamboara soso-kevitra marika tsara tarehy tahaka ny tranonkalanao